Ngaba ufuna ukuthatha inxaxheba kwiHlabathi leMatshi? - Ihlabathi ngoMatshi
Ngaba ufuna ukuthatha inxaxheba kwiHlabathi leMatshi?
Ikhaya » Ngaba ufuna ukuthatha inxaxheba kwiHlabathi leMatshi?
Ihlabathi likaMatshi ngoxolo kunye nokungabi nonyango luyintlangano yentlalo eya kuhamba ngohambo lwayo lwesibini ngo-Oktobha 2 2019. Ukuqala kweMatshi ka-March kubanjwe ngonyaka we-2009 kwaye bakwazi ukukhuthaza Phantse iziganeko eziliwaka ngaphezulu kweedolophu ze-400. Eyona nto ibaluleke kakhulu kwi-World World Second March ufuna ukufikelela kwakhona kwaye unqobe.
I-World Matshi Uxolo kunye wokungabheneli esicwangciswe nangamaqela umbono humanistic, saa ehlabathini lonke usukelo eqhelekileyo ukwenza nokwandisa ulwazi imfuneko uluntu ehlabathini lonke baphila ngoxolo ubudlova .
Kwaye oku kubalulekile ukuba abatsha abathathi-nxaxheba bajoyine le nyathelo elitsha. Ukuba ungomnye wabo kwaye ufuna ukusiqonda kangcono, simema ukuba uphewule kwiwebhu, ufunde amanqaku ahlukeneyo akuyo.
Luhlobo luni lokuthatha inxaxheba esiyifunayo?
Ukususela kwiHlabathi iMatshi ngoxolo noxolo, sivulelekile kuyo nayiphi na into, ubudlelwane obumbeneyo okanye umntu ngamnye, ukusuka naphi na emhlabeni, ofuna ukusebenzisana nathi ukuxhasa eli qhinga kwakhona. Njengoko kuchazwe ngasentla, umkhangeli uza kuqala i-2 ka-Oktobha ye-2019 kwaye iya kujikeleza ihlabathi, iphele ngo-Matshi 8 we-2020.
Ngale nyathelo esithatha inxaxheba sizimisele ukuba abantu okanye imibutho eboniswa nale ntshukumo, badibanise kwimibhiyozo ngokudala imisebenzi efanayo phakathi neentsuku ezithe tye uhambo.
Yonke imisebenzi kunye nezenzo ezenziwayo aziyiyo inzuzo, oko kukuthi, akukho khothazo lwezoqoqosho, kwaye ukuqhutywa kufuneka kusebenze ngokwakho.
Sifuna imibutho okanye abantu abenzileyo kwaye banqwenela ukuthatha inxaxheba kunye nokudala umgca woqhagamshelwano ngqo nabacebisi.
Imisebenzi eya kuphuhliswa kufuneka ikhuthazwe ukuba ihlanganise inani elaneleyo labantu (abantwana okanye abantu abadala), ubuncinci abathathi-nxaxheba be-20 bafanelekile.
Ukuba ufuna ukuthabatha inxaxheba, kodwa ungenayo ingcamango yomsebenzi othile, siya kuqhagamshelana nawe ukubonisa imizekelo yezinto ezinokuqaliswa. Kodwa iziphakamiso zingaphinde zenziwe kwaye ziqulunqwe ngokugcwele ngumntu onoxanduva lokuthatha isenzo njengoko nje zikho kwisakhelo semilinganiselo ye-Matshi.
Uya kucelwa ukuba ukhethe usuku oluphuma 2 ukususela ngo-Oktobha ukusuka kwi-2019 ukuya kwi-8 ukususela ngoMatshi we-2020, ukucacisa umsebenzi okhethiweyo kwaye oko kungenokuba ngumyinge womhlaba wonke ohamba phambili. Ngokuxhomekeke kumhla esivumelana ngawo, lo msebenzi uya kuba yinxalenye yomkhonto ophezulu, okanye unokuba yinxalenye yemigangatho yesibini.
Xa ubhalisiwe uya kufumana i-imeyile kwidilesi ye-imeyile oyibalulekileyo, apho siza kuqalisa umnxibelelwano onika ulwazi oluthe vetshe, kwaye uzama ukuqokelela ulwazi oluyimfuneko ukufeza umsebenzi ngokuphumelelayo.
Kuhlala kubalulekile ukuba ubone izinto ezixhasayo (iifoto okanye iividiyo), ukwenzela ukuba bakwazi ukwabelwana kwiwebhu nakwiintanethi zentlalo yombutho, ngaloo ndlela kudala irekhodi yalo mlando wembali.
Indlela yokuba yinxalenye yentsebenzo?
Bonke abantu okanye imibutho abanqwenela ukwenza ukudala iziganeko amancinci okanye imisebenzi ngexesha uhambo imini yonke, kufuneka nqakraza kwi eli qhosha kuphela ukuba bathathe inxaxheba kwaye ushiye iinkcukacha zakho ukuze sikwazi ukuqhagamshelana nawe nge email, ngokunjalo baya avalele eziyimfuneko sinako cebisa ezinye iimbono imisebenzi ukuyenza.
Vuma kwaye ujoyine oku
Sishiye idatha yakho yokuthatha inxaxheba
Ikhubaze okwethutyana kude kube kuvulwa igiya entsha. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo onokuthi uqhagamshelane nayo info@theworldmarch.org